Hay'adda shaqo bixinta oo magdhaw bixisay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hay'adda shaqo bixinta oo magdhaw bixisay
Astaanta hay'adda shaqo bixinta ee iswiidhan
Hay'adda shaqo bixinta (arbetsförmedlingen) ayaa lagu xukumey magdhaw gaaraya 60 000 oo kroron. Hay'adda ayaa lagu soo edeeyey kala soocidda aadamaha, lana hor keenay maxkamad, taasoo talaabo ka qaadey riddeyna xukunkaas magdhawga ah, kadib markii ay maxkamaddu u argtey in Hay'adda shaqo bixintu ku xadgudubtey Ninkaan diintiisa iyo doorashadiisa.
Ninkaan oo ah nin muslim ah ayaa diidey inuu salaan ka qaado sarkaalad sare oo iyadu madax ka aheeyd shirkad, shirkaddaas oo ay hay'adda shaqo bixisku tababar u warsaneeysey Ninkaan muslimka ah, isla markaana ay kulan isbarasha ah u sameeyneeysey hay'adda shaqo bixintu (arbetsförmedlingen). Ujeedada tababarkaan shaqada ah ayaa ahaa in Ninku helo goob shaqo oo uu ku tababarto. Ninkaas muslimka ah ayaan helin goobtii tabobarka, hay'adduna waxeey eedda dusha ka saartey Ninka. Waxeeyna hay'addu ka joojisey waxbarashadii ay siin jireen iyo dhaqaalihii uu ku qaadan jirey labadaba.
Ninkaan ayaa caawinaad u doontey hayadda ka hortaga kala soocida ee magaceeda loo soo gaabsho DO ( Diskrimineringsmannen). Hayaddan DO ayaa dacwo ka dhana fikrada kala soocida adamaha iyo faro galinta ama isku takoorista diimaha ku fulisey hayadda shaqo bixinta. Go'aan kan ku dhaca Hayadda shao bixinta yaa aha kii ugu horeeyay ee dhigiisaa ee ay DO ku guuleeysato, waloow aysan helin magdhawgii ay codsatey oo gaara hayey 150 000 oo kronor.